पार्टी निर्माण र बेथितिविरुद्धको खवरदारी हो जागरण अभियान | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / पार्टी निर्माण र बेथितिविरुद्धको खवरदारी हो जागरण अभियान
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता May 15, 2019	0 106 Views
नेपाली कांग्रेस दाङका सभापति
२०७४ को निर्वाचनमा हार व्यहोरेपछि सत्ता राजनीतिबाट खुम्चिएको नेपाली कांग्रेस कमजोर प्रतिपक्षको आरोप खेप्दै आइरहेको छ। तीनवटै तहका सरकारले गर्ने कामको रचनात्मक खवरदारी गर्ने प्रमुख भूमिकामा रहेको कांग्रेस अहिले आफ्नो कमजोरी कहा“ छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन कार्यकर्ता माझ पुगेको छ। खास समस्या र गुनासा के छन् त कार्यकर्ताका गुनासा सुन्ने, पार्टीलाई चुस्त बनाउने र सरकारी कामको खवरदारी पनि त्यहीबाट गर्ने भन्दै थालिएको जागरण अभियान र पार्टी निर्माणका सवालमा युगबोधकर्मी जे.एन.सागरले नेपाली काग्रेस दाङका सभापति कीर्तिबहादुर खड्कासग गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप यहा“ प्रस्तुत गरिएको छ। –सम्पादक
जागरण अभियान किन ?
पहिलो कुरा नेपाली काग्रेस आफनै पार्टी, संगठनलाई चुस्त दुरुस्त र बलियो बनाउनका लागि यो अभियान थालिएको हो। मुख्यगरी आप्mना नेता, कार्यकर्ताहरुलाई सुसूचित गर्ने, प्रशिक्षित गर्ने काम नै हो। अर्कोतिर यो अभियानमार्फत अहिलेको सरकारले गरेका राम्रा÷नराम्रा कामहरुलाई जस्ताको तस्तै जनतामाझ लैजानका लागि यो अभियान थालिएको हो। राम्रोलाई राम्रो र गलतलाई गलत भयो भन्ने कुरा कार्यकर्ता जनतामाझ लैजान लागेका हौं।
दाङमा कसरी चल्दैछ अभियान ?
वैशाख ३१ गतेदेखि साविक पाच नम्वर निर्वाचन क्षेत्रको हेकुलीबाट अभियान शुरु भएको छ। दंगीशरण गाउ“पालिकाको हेकुलीमा कांग्रेसका सबै कार्यकर्ताहरुस“ग बसेर अन्तरक्रिया गर्र्छांै। पार्टीका नेताहरुलाई निर्देशन गर्छौं। अर्कोतिर विकासको कामका विषयमा पनि छलफल हुन्छ। कसरी विकास हु“दैछ। प्रक्रिया के भइरहेको छ भन्ने मात्रै होइन कांग्रेसलाई भविष्यमा कसरी लैजाने भन्ने विषयमा पनि अभियानका क्रममा वृहत छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। यो अभियान एक महिनासम्म चल्छ। वैशाख ३१ देखि पाच गतेसम्म साविक पा“च नम्वर क्षेत्रमा, ६ देखि १० सम्म चार नं. क्षेत्रमा, १८ देखि २२ मा २ र ३ मा र त्यसपछि एक नम्वर क्षेत्रमा जेठ २७ गतेसम्म यो अभियान चल्दैछ।
सबै पालिकामा पुग्नुहुन्छ ?
पहिलो चरणमा पालिकालाई समेटेर अभियान चल्नेछन् ।
तर दोस्रो चरणमा फेरि हरेक पालिकास्तरमा जाने कार्यक्रम ल्याइनेछ। हाम्रो पुरानो संरचनाअनुसार अहिले भइरहेको छ भने नया“ संरचनाअनुसार पनि हामी पुग्छौं।
त्यहा पुगेर कार्यकर्ताका गुनासा सुन्नुहुन्छ ?
भाषण गर्न जाने होइन। हामीले कार्यक्रम बनाएकै कार्यकर्ताहरुको गुनासो सुन्नका लागि हो। आमरुपमा हामीप्रतिको गुनासो, सरकारप्रतिको गुनासो सबै गुनासाहरु सुन्नका लागि अभियान चलाइएको हो।
सर्वसाधारणले पनि गुनासो गर्न पाउछन् ?
हामी भाषण भीषण गर्दैनौं। सबैका कुरा सुन्छौं। गोप्य भए गोप्यमै सुन्छौं र भेलामै पनि गुनासा सुन्नेछौं। कार्यकर्ताको सुन्ने अरुको नसुन्ने भन्ने हुदैन।
सुन्ने मात्रै कि सुनुवाइ पनि हुन्छ ?
हुन्छ। समस्या के हो भन्ने थाहा पाएपछि त्यसको समाधान खोज्ने काम हामीले गर्नेछौं।
गुनासो सुन्ने भन्दा पनि गुट विस्तार गर्ने अभियान हो भन्छन् त ?
यो कसैको आफ्नो विश्लेषण होला, तर सा“चो कुरा होइन। हामीले अभियानमार्फत का“ग्रेसका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई एकतावद्ध बनाउने काम गर्नेछौं। अहिले विषम परिस्थिति छ। यसको सामना पनि गर्नुपर्नेछ। र, सत्तामा बस्नेहरुलाई पनि अभियानमार्फत तपाइ“हरुले राम्रो काम गर्नुस, विकासको कामलाई अगाडि बढाउनुस् र जनतालाई सुख, समृद्धि दिनुस् भन्नेछौ भने गलत काम भएको भए यहा“निर गलत भयो पनि भन्नेछौं।
गुट होइन कांग्रेस जान्छ त अभियानमा ?
हो। त्यहा“ गुटको सवाल हु“दैन। सिंगो कांग्रेस जान्छ। कार्यकर्ताका कुरा सुन्छ। जनताका कुरा सुन्छ। त्यहा“ गुटको गन्ध दिदैनौं। सबै कांग्रेस एकजुट हौं। तपाइ“हरु पनि एक भएर जानुस् भन्छांै कार्यकर्ताहरुलाई पनि।
कार्यकर्ताले हामी एक छौं । बरु नेता एक हुनुप¥यो भन्छन्, किन मान्नुहुन्न ?
पार्टीलाई आउने भोट हेर्दा एकता छ भन्ने देखिन्छ। त्यसलाई अझै मजवुत बनाएर लैजाने प्रयत्नमा हामी छौं। हो हामी नेतृत्वमा केही समस्या छ। हिजोको त्यो विमति र असन्तुष्टि जुन छन् , हामीबीचका असन्तुष्टिलाई माझ्न पनि यो अभियान थालिएको हो। त्यति मात्रै होइन, त्यो विमतिलाई हटाएको कुरा जनता र कार्यकर्तालाई विश्वास दिलाउनका लागि पनि हामी अभियान लिएर जा“दैछांै। अब त्यस्तो समस्या हु“दैन। सबै नेता, कार्यकर्ता, जनता एकताबद्ध भएर देशको विकासमा लाग्ने कुरामा दुईमत छैन।
नेतृत्व मात्रै हो कि अरु पनि छन् पार्टीलाई समस्यामा पार्ने ?
पार्टीलाई अप्ठेरो पार्ने गतिविधि मैले पनि गरेको छैन र अरु नेता, कार्यकर्ताहरुले पनि गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। कहीं कतै मान, सम्मान, मूल्यांकनमा तलमाथि हुदा सानातिना समस्या आउछन्। त्यस्तो समस्या नआउनुपर्ने हो भन्नेमा साथीहरु सबैले आत्मबोध गरेका छौं। अब दोहोरिन नदिनका लागि सबैलाई आश्वस्त पार्ने काम पनि गर्नेछौं।
पुरानो पार्टी, काम पनि पुरानो। नया“ पुस्ताको पालो चाहि कहिले आउछ ?
हो। वास्तवमा कांग्रेसलाई नया परिस्थितिअनुसार परिमार्जन गर्न ध्यान पुग्न सकेको छैन। त्यो हामीले स्वीकार्नुपर्छ। नया“ पुस्ता आइसक्यो। उहा“हरुलाई अवसर दिनुपर्ने बेला आइसकेको छ। त्यसका लागि एउटा खालको सिष्टम बसाउन लागिपरेका छौं। कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा यो अभियानमा पनि सुझाव आउलान् सबैको सुझाव, सल्लाहअनुसार काम हुनेछ।
नेविसंघ, तरुणदलभित्रका युवाहरुलाई आपसमा लडाउने र अवसरमा पनि ढिलाइ गर्दा पार्टीको भविष्यमै नै धक्का लाग्ला नि ?
यो गम्भीर विषय हो। हामी त प्रजातन्त्रका लागि लड्ने पार्टीका कार्यकर्ता हौं। हामीले पनि यो विषयमा आत्मसात गरेर अघि बढ्नुपर्छ र अन्य दलहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएर प्रजातन्त्र जोगाउनका लागि गम्भीर हुनुपर्छ। अर्को कुरा के हो भने हामी सबै सत्तामुखी हुन थालेका छौं। हाम्रो बोली र व्यवहार एउटै छैन। यसतर्फ कांग्रेस पनि गम्भीर छ। अभियानले हामी सबैलाई, कांग्रेसलाई, अन्य पार्टीहरुलाई पनि सन्देश दिनेछ।
झण्डै दुई वर्ष भो दाङमा दशवटा सरकार आएको, अहिले आएर खबरदारी ?
आज होइन पहिलेदेखि नै खबरदारी अभियान चलिरहेका छन्। निरन्तर खबरदारीको काम जिम्मेवार प्रतिपक्षको हिसाबले हामीले खबरदारी गर्ने काम गरिरहेका छौं। अहिलेका सरकारलाई पा“च वर्षको म्याण्डेट छ । म्याण्डेट पाएकाहरुले काम गरेर देखाउनुप¥यो। हामी पनि राम्रा कार्यमा साथ दिन्छौं। प्रतिपक्ष भन्दैमा राम्रा कामको प्रशंसा गर्नुह“ुदैन भन्ने होइन। राम्रो काम गर्नुस् हामी पनि साथ दिन्छौं। प्रतिपक्षको साथबाटै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। तर त्यो प्रतिपक्षलाई साथमा ल्याउने काम त सत्तापक्षको हो। सत्तापक्षले धकेल्दै लिएर भित्तामा टा“सेपछि प्रतिपक्ष चुप लागेर बस्न सक्दैन। अहिले हामीले सरकारले रचनात्मकरुपमा सचेत बनाइरहेका छौं। हामीले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरेका छैनौं। बरु आमसभा गरेर सुझाव दिइरहेका छौं। सचेत गराउने र रचनात्मक खबरदारी गर्ने काम गरिरहेका छौं। जनताले हिजो जस्तै आन्दोलन गरोस् प्रतिपक्षले भन्ने चाहेका छन्। तर दुई तिहाइको सरकार हु“दा पनि कांग्रेसले आन्दोलन गरेर काम गर्न दिएन भन्ने नराम्रो वातावरण सिर्जना फेरि नहोस् भनेर हामीले रचनात्मक खवरदारी गरिरहेका छौं।
दाङका पालिकाहरु सबैले नराम्रो गरेजस्तो लाग्छ र तपाइलाई ?
सबैले राम्रै गरेका छन् भन्न म सक्तैन र सबैले नराम्रै गरेका छन् भन्न पनि सकिदैन। कहा“, कहा“ र को कसले राम्रो गरेका छन्ु भन्ने कुरासहित मूल्यांकन जनताले गरेका छन्। कति काम भयो र कति हुन सकेको छैन।
कामको मूल्याङकन नगरी कसरी खबरदारी गर्नुहुन्छ त ?
पालिकाहरुले कस्तो काम गरेका छन् भनेर मूल्याङकन गर्ने बेला आएको छ। नया“ संरचना आउ“दा संरचनालाई स्थापित गर्दा कठिनाई पनि होला । तर अब त्यो समय सकिएको छ। त्यसैले हामीले पालिकाहरुको कामको मूल्यांकन गर्न अभियान ल्याएका हौं। हामी गाउ–गाउ जान्छौं। जनताका गुनासा सुन्छांै। पार्टीका नेता कार्यकर्ताका कुरा सुन्छौं। कसले कति काम गरेको छ र कस्तो काम गरेको छ भन्ने कुराको जानकारी त्यहीबेला पाइनेछ। राम्रो गरेको भए राम्रो भयो भनौला । आवश्यक साथ सहयोग पनि गरौंला । नराम्रो काम भएको भए खबरदारी पनि अभियानकै क्रममा गर्ने हामीले योजना बनाएका छौं।
कांग्रेसकै कार्यकर्ता वन, खोला दोहनमा लागेका छन्, के गर्नुहुन्छ ?
पार्टीले यस्ता गतिविधि हुन नदिन सबैलाई सचेत गराउने काम गरिरहेको छ। चाहे पार्टीका होलान् चाहे भातृ संगठनका होलान् वा शुभेच्छुक किन नहोलान् गलत कार्यमा नलाग्न सबैलाई सचेत गराउने काम भइरहेको छ। जनताको विकासका लागि सदुपयोग गर्ने कुरामा हामी जोडिनुपर्छ। तर दुरुपयोग हुने कुरामा टाढा रहन सचेत गराउने कुरा गरिरहेका छौ। ठ्याक्कै यस्ता गलत काममा लागेको भन्ने गुनासो त आएको छैन, तर कहींकतै त्यस्तो पाइए सचेत गराउन हामी तयार छौ।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले के चाहि“ गर्न सकेनन् भन्ने तपाइलाई लाग्या छ ?
पहिलो कुरा त आधारभूत वस्तुको उपलव्धता सहज हुन्छ कि भन्ने जनताले दुईतिहाइको सरकारबाट ठूलो आशा गरेका थिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, विकासलगायतका सेवा सहज हुन सकेनन्। स्वास्थ्यमा त्यस्तै समस्या छ। शिक्षामा पनि त्यस्तै खचबज छ। यहा सुधार आउन सकेन । तर सत्तामा बस्नेहरुले दम्भ देखाउनु गलत कुरा हो। त्यो भइरहेको छ। हिजो स“गै लडेर आएकाहरु विप्लव कसका विरुद्ध फेरि लड्ने त्यो त गलत नै छ । तर सगै रहेकाहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने काम पनि गलत नै हो। तसर्थ दम्भले नाश गर्छ। विकास गर्दैन। यो सबैले बुझ्नुपर्छ। आज प्रेसमाथिको अंकुशका प्रस्ताव आउदैछन् के हो यो ?
अन्त्यमा, काग्रेसको आन्तरिक पुनर्संरचना कहिले हुन्छ ?
पार्टी पुनरसंरचनाको सेटिङ हु“दैछ। भर्खर विधान बन्यो। सोही अनुसार हामीले पार्टी संरचनालाई नया“ संरचनाअनुसार बनाउनेछांै।
कति लाग्ला ?
छिटै सम्पन्न हुन्छ।
Previous: ग्रीन बेल्टको बालुवा निकाली माटो भरिने
Next: समाजको जरोमै विषादी फैलेको जस्तो लाग्छ